Manomboka ao Dhaka ny fihaonambe SAARC faha-13 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2019 3:13 GMT
Nanomboka ao Dhaka, renivohitr'i Bangladesh ny andro nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy ny fihaonambe faha-13 ho an'ny Fikambanana Fiarahamiasa Ara-paritra ho an'ny firenena fito Aziatika Tatsimo (SAARC) ahitana an'i Bangladesh, Bhutan, India, Maldiva, Nepal, Pakistan ary Sri Lanka. Mavitrika nanomboka ny taona 1985, miditra amin'ny faha-telopolo taona ao anatin'ny fanantenana lehibe ny tsenan-kevitra. Ahitana fangarom-ponina maherin'ny 1,4 miliara, mbola eo am-pamahana ny olana mifandraika amin'ny fampihenana ny fahantrana, ireo sakana ara-barotra, sy ny famerana fivezivezena ary ny fiarahamiasa eo amin'ny samy zareo izy ireo, izay mety ho sehatra ifampitsinjovana sy hanana endrika firaisankina tahaka ny an'ny vondrona eoropeana ireo firenena fito ireo.
Ireto ny sasany amin'ireo bilaogera sy loharanom-baovao miresaka momba io fihaonambe io:
Nandany fotoana betsaka i Bangladesh nandravaka ny renivohitra, sy ny toerana manodidina misy ny fihaonambe tamin'ny jiro mahafinaritra sy endrika sisin-dalana hafa. Nodiovina avokoa ny làlana ary nohatsaraina. Naka sary vitsivitsy ilay bilaogera Rajputro, izay manome anao topi-maso an'i Dhaka ny hariva nandritra ny SAARC. Noraisina ny fepetra henjana ara-piarovana tamin'ny fanapariahana mpitandro ny filaminana 40.000 ary tsy navela nandehanan'ireo olon-tsotra ireo arabe lehibe ao an-tanànan'i Dhaka. Betsaka ireo orinasa nikatona ary nambaran'ny governemanta ho andro tsy fiasana ny 13 Novambra ka lasa lavalava 3 andro ny faran'ny herinandro mba hiarovana ny fivezivezen'ireo olo-manan-kaja.
Na dia amin'ny endrika fety aza ny tanàna, dia somary vitsy ny fitohanan'ny fifamoivoizana tsy noho ny fialantsasatra ihany. Maro ireo arabe tsy misy mpandeha mihitsy satria tsy te-iharan'ny fanorisorenana ataon'ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka, satria nametraka toerana fanarahamaso amin'ny faritra maro izy ireo ka mibahana ny fifamoivoizana. Nanjary voaràra ho an'ireo mpangataka an-dalabe ny tanànan'i Dhaka satria mety hahatonga henatra sy olana ara-piarovana eo imason'ireo olo-manan-kaja vahiny izy ireo. Hanohintohina tanteraka ny fandaharam-potoanan'ny SAARC amin'ny fanalefahana ny fahantrana any amin'ireo firenena Aziatika Atsimo ny fisian'izy ireo! Leon'ny toe-javatra mitovy amin'ny tsy fahafahana mivoaka amin'ny hariva i Ilyeana, mpila ravinahitra. Salam indray manontany hoe ohatrinona ny vola very amin'ny toekarena noho ny fanakatonana ny ampahany amin'ny tanànan'i Dhaka. Ao amin'ny bazaarin'i Dhaka, mitondra fihetseham-po mifangaro ny SAARC.
Sanjoy miresaka momba ny asa be mpitsiriritra indrindra amin'ny fanomanana ny fihaonambe. Adda manana fanontaniana sasantsasany hovalin'ireo mpitarika ny SAARC satria toa tsy nisy ny fifanekena natao tamin'ireo tebola telo mampiadihevitra momba ny fiarahamiasa ara-barotra SAFTA.
Nankasitraka ny fidiran'i Afghanistan & Shina ao amin'ny SAARC ny Daily Pakistan amin'ny filazana azy ireo ho ‘rà vaovao ao amin'ny SAARC anemika (tsy ampy rà)’. Na izany aza, mbola hotapahan’ireo firenena efa ao ny fidiran'ireo fanjakana roa tonta ireo.
Miandrandra an'i Azia atsimo hiala amin'ny fizarazarana ara-paritra ny olona ary hametraka ny SAARC ho zava-dehibe sy mahavokatra. Tokony ho zava-dehibe izany ary hitondra tombontsoa azo antoka ho an'ny mponina any Azia Atsimo, izay miaina ambanin'ny fahantrana ny dimampolo isan-jaton'izy ireo, zara raha mandray 1 dolara isan'olona isan'andro.
* Tranonkala ofisialin'ny SAARC.